समुदायमा रहेका क्षयरोग बिरामीको परीक्षण - नेपालबहस
समुदायमा रहेका क्षयरोग बिरामीको परीक्षण
| १०:३१:४२ मा प्रकाशित
११ फागुन,चितवन । नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था नारायणगढले समुदायमा रहेका क्षयरोगका बिरामीलाई परीक्षण, उपचार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । विसं २०३६ बाट निरन्तररूपमा सो संस्थाले अभियान चलाउँदै आएको छ ।
संस्थामा हाल २९ क्षयरोगका बिरामी उपचाररत छन् । ती बिरामीमध्ये सात जनालाई मल्ट्री ड्रग रेसिस्टेन्ट अर्थात् महङ्गो खालको औषधि खुवाएर उपचार गरिँदैछ । छ महिना औषधि खाँदा निको नभएका जटिल बिरामीलाई यो औषधि खुवाउने गरिन्छ । न्यौपानेका अनुसार ती बिरामीलाई एक जनाको उपचारमा रु आठ लाख हाराहारी खर्च हुने गर्दछ । उनीहरुका लागि सरकारले औषधि, पोषण र परीक्षण खर्च उपलब्ध गराउँछ । त्यसको सहजीकरण संस्थाले गर्दै आएको न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुलाई नौदेखि १८ महिना औषधि खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घले क्षयरोगका बिरामीको एचआइभी एड्स परीक्षण र एचआइभीका बिरामीको क्षयरोग परीक्षणसमेत गर्ने गर्दछ । सो संस्था सञ्चालनका लागि रु ४७ लाख ५० हजारको अक्षयकोष खडा गरिएको छ । संस्थाले विगत १० वर्षदेखि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको छ । यससँगै हालै मात्र नयाँ एम्बुलेन्स खरिदका लागि संस्थाका पूर्वसभापति भीमराज पाठकले रु १५ लाख संस्थालाई उपलब्ध गराएका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारी सरकारले गर्नुपर्ने काम यस संस्थाले गर्दै आएको बताउछन् । जनचेतनामार्फत शङ्कास्पदलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नियमित औषधि खुवाउनेलगायतका काम संस्थाले गरिरहेको उनको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमण शुरु भएलगत्तै औषधि प्रयोग गरिरहेकाहरुलाई सङ्गठित बनाएर अनुभव आदानप्रदान र उपचारमा सहयोग गरेर नमूना काम गरेको उनले बताएका छन् ।
भारतले सन् २०२५ सम्म क्षयरोगको संक्रमण अन्त्य गर्ने ५ महिना पहिले
ओलीलाई गल्ती सुधारी प्राज्ञिक मर्याताको पालना गर्न पूर्वउपकुलपतिहरूकाे आग्रह ३ घण्टा पहिले
सरकार र विप्लव नेकपाबीच एकैदिन दुई चरणको वार्ता ! ५ घण्टा पहिले
छिस्तीमा हवाई चप्पल उद्योग सञ्चालनमा १० घण्टा पहिले
फेवातालको क्षेत्रफल दुई हजार ५०० रोपनी वृद्धि ७ घण्टा पहिले
ताररहित होम ब्रोड ब्याण्ड सीम सञ्चालनमा ८ घण्टा पहिले
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ ९ घण्टा पहिले
विद्युतीय भुक्तानी सीमा अब दोब्बर, इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन २० लाख लेनदेन गर्न मिल्ने ६ घण्टा पहिले
कर्णालीका सुर्खेतबाहेक सबै जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणमुक्त १ दिन पहिले
एकैपटक ३१ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन ६ दिन पहिले
दुईवटा ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु १ दिन पहिले
युरोरडिस फोटो अवार्डमा नेपाल दोस्रो ६ दिन पहिले
अमेरिकामा आधा पोथी र आधा भाले जस्तो चरा भेटियो ५ दिन पहिले
नेबिसंघको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ३ दिन पहिले
सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन् सर्कुलर ९ घण्टा पहिले
पोखरामा केटू आरोहरण टोलीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिने ४ हप्ता पहिले
विपत्तिलाई मध्यनजर राख्दै रसुवामा पूर्व तयारीका सामग्री सङ्कलन २ हप्ता पहिले
पुल्चोकबाट रुसमा चरेश पठाउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति नियन्त्रणमा २ हप्ता पहिले
भट्टको हत्यारालाई पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न नेविसंघको माग ४ हप्ता पहिले
कुहिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला ६ दिन पहिले
गायिका एलिना चौहानको चखेवा जोडी ४ हप्ता पहिले
आगामी तीन दिन मेघगर्जन, चट्टयाङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना ३ दिन पहिले
निजी क्षेत्रले भन्यो :- अध्ययनपछि मात्रै कृषिमा विदेशी लगानी ! २ महिना पहिले
भारतबाट आउनेको कमी आएसँगै सामान्य बन्दै विद्यालय क्षेत्रको अवस्था ८ महिना पहिले
चीनले विकास गर्यो पुनः प्रयोग योग्य अन्तरिक्ष यान ६ महिना पहिले